Dị ka ha na-ekwu, ‘a bad day in London is still better than a good day anywhere else’ so of course, London nwere na-na anyị na ndepụta nke oké ebe na Europe ileta na March.
Ọ bụrụ na ị bụghị n'elu Winter oyi na-atụ ma, mgbe Zermatt na Switzerland bụ a mara ezigbo mma nzọ chọta snow. One of the most famous ntụrụndụ na Europe, ntụ ntụ na-abụkarị ihe ọma ruo mgbe ọgwụgwụ nke April.
Dị ka ọtụtụ nke Zermatt si skai ebe ina n'elu 2000 mita, na e nweghị ụkọ snow mgbe ọ na-abịa pulite ski. The snow pụrụ ịbụ patchy na obodo. Otú ọ dị, up the mountain, ị ga-ahụ ihe dị iche iche. Fresh snow, akpatụbeghị tracks, na ọtụtụ fun na- eche ka a chọpụtara. Ka ewere enweta zuru nwere nke ọhụrụ snow, mgbe ọ ka na-anọ mma, iku a skai ndu n'ihi na ụfọdụ anya-piste ski.